Tuesday April 28, 2020 - 11:31:16 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda Mareykanka ayaa si mar la arag ah uga hadashay khasaaraha ka dhashay qaar kamid ah duqeymihii sanaddii lasoo dhaafay ay ka geysatay Koonfurta dalka Soomaaliya.
waa sawir uu dayax gacmeed ka qaaday Kuunyo Barroow
Warbixin kasoo baxday taliska AFRICOM ayaa lagu sheegay in duqeyn dhacday23 bishii February sanaddii 2019in lagu dilay laba qof shacab ah halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen duqeynta oo ka dhacday degmada Kuunya Barroow ee Sh/hoose.
Taliska ciidanka Mareykanka qaaradda Afrika ayaa inkiray dhammaan duqeymihii shacabka badan lagu dilay ee ee sanaddii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanno katirsan gobollada Sh/Hoose iyo Jubbooyinka.
Hoos ka daawo sawirrada duqeyntii Kuunyo Barroow ee Mareykanku qirtay
Shabakad ka faalloota duqeymaha ay diyaaradaha reergalbeedka ka geystaan wadamada caalamka islaamka ayaa qiraalka ka yimid AFRICOM ku tilmaamtay mid aan ku filnayn run ka sheegidda waxa ka socda Soomaaliya.
Duleedka Kuunyo Barroow sanadkii hore waxaa ka dhacay 2 duqeyn oo dhammaantood lagu beegsaday gaadiid ay lahaayeen dad shacab ah oo ubadnaa ganacsato caan ka ahaa Sh/hoose balse Mareykanka ayaa iska inta tiray wuxuuna ku gaabsaday oo kaliya duqeyntii lagu dilay Macallin dugsi Qur'aan iyo canug yar oo 20 maalmood dhallanaa.
Waa markii 2aad oo Mareykanku uu qirto in duqeyn uu ka geystay Soomaaliya ay khasaaro kasoo gaartay dad shacab ah, horay wuxuu u sheegay in 2 qof rayid ah uu ku dilay duleedka degmada Ceelbuur ee gobolka Galguduud.
hay'adaha sheegta in ay udoodaan xuquuqul insaanka ayaa ugu baaqay Mareykanka in uu si hufnaan ku jirto uu uga hadlo xasuuqa ay diyaaradihiisu ka wadaan Soomaaliya, tan iyo markii uu Trump qabtay xilka madaxtinimada Mareykanka ayay sare ukaceen duqeymaha ay diyaaradaha Drone-ka ka geysanayaan Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.